ဒီမိုကရေစီရပြီလား . . . ~ Rohingya Blogger
ဒီမိုကရေစီရပြီလား . . .
by လူထုစိန်ဝင်း>>> နယ်က စာဖတ်ပရိသတ်မိန်းကလေးတွေနဲ့ လူငယ်လေးတွေ ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်း ဒီမေးခွန်းကိုမေးတတ်ကြတယ်။ စာစုံအောင်ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ လူငယ်တချို့ကတော့ "ရွှေပြည်ကြီး ကိုရောက်ပြီလားအဘ"လို့ မေးကြတယ်။
တစ်ခါက လောကပါလတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ရွှေပြည်ကြီးကို ရောက်ဖို့မဝေးတော့ပါဘူးလို့ ရေးခဲ့ဖူးတာကို ရည်ညွှန်းပြီး 'ရွှပြည်ကြီး' ရောက်ပြီလားလို့ မေးတာပါ။ သူတို့ဒီလိုမေးတာဟာ တကယ်သိချင်လို့မေးကြတာဖြစ်တယ်။ ခနဲ့ပြီး၊ ကလိပြီးမေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ် ငယ်ကြသေးပြီး အတွေ့အကြုံနုနယ်ကြလေတော့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုမှာ အားနည်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ယုံကြည်လေးစားမှုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အဖြစ် သဘောထားပြီး လာရောက်မေးမြန်းကြတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူငယ်လေးတွေကို မှားယွင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေမပေးချင်ဘူး။ အလိမ္မာဖက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွထွက်တဲ့ ယောင်ဝါးဝါးစကားမျိုးလည်း မပြောချင်ဘူး။ မျက်မှန်စိမ်းတပ်ပြီး ကြည့်တဲ့အဆိုးမြင်သက်သက် စကားတွေပြောပြီး သူရဲကောင်းလည်းမလုပ်ချင်ဘူး။ သူတို့လေးတွေရဲ့ ယုံကြည်လေးစားမှုကို တန်ဖိုးထားပြီး ကိုယ်မြင်တဲ့အတိုင်း မှန်ရာကိုသာပြောချင်တယ်။
Credit:Eleven Media Newer Post